Mesut Ozil ayaa sheegay in uu rabo in uu sii joogo Arsenal uuna arrinta ku saabsan mustaqbalkiisa kala hadli doono kooxdiisa marka ay u dhamaadaan | Gaaroodinet
Mesut Ozil ayaa sheegay in uu rabo in uu sii joogo Arsenal uuna arrinta ku saabsan mustaqbalkiisa kala hadli doono kooxdiisa marka ay u dhamaadaan
July 13, 2017 - Written by horseed horseed
Hargeysa(GRDI)Mesut Ozil ayaa sheegay in uu rabo in uu sii joogo Arsenal uuna arrinta ku saabsan mustaqbalkiisa kala hadli doono kooxdiisa marka ay u dhamaadaan ciyaaraha ay dheelayaan xilli ciyaareedka ka hor ee ka dhcaya Australia iyo Shiinaha.
Ciyaartoygan dhexda ka dheela oo 28 jir ah ayaa haysta qandaraas uu Arsenal kula sii joogi karo ilaa iyo 2018ka laakiin waxaa aad la isula dhex maray warar ku saabsan mustaqbalkiisa.
“Xaqiiqadii waxaan danaynayaa in aan sii joogo” ayuu yiri ciyaartoygan Jermalka u dhashay Arbacadii.
“Marka qofkaste uu London ku laabto ayaan kooxda la fadhiisan doonaa si aan u falanqayno mustaqbalkayga. Markastana waxaan dhahaa wanaag badan ayaan dareemayaa in aan joogo Arsenal.”
Arsenal ayaa kooxda Sydney la dheeli doonta Khamiista, halka ay Sabtidana foodka iska dari doonaan naadiga Western Sydney Wanderers ka hor inta aysan Shiinaha u safrin halkaas oo ay labo ciyaarood oo kale ku leeyihiin.
Kooxda uu tababaro Arsene Wenger ayaa 19 Juunyo la kulmi doonta kooxda Bayern Munich oo ay isku arki doonaan magaalada Shanghai iyaga oo kooxda Chelsea-na 22 bishan Luulyo kula dheeli doona magaalada Beijing ka hor inta aysan England ku laabanin.